Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbax weyn oo lagu taageerayo kacdoonka kajira Itoobiya oo ka dhici doona Copenhagan-Denmark
Banaanbax weyn oo lagu taageerayo kacdoonka kajira Itoobiya oo ka dhici doona Copenhagan-Denmark
Posted by ONA Admin	/ November 2, 2016
Waxaa maalinka barito ah 03 Nov.2016 Khamiis ka dhici doona caasimada wadanka Denmark ee Copenhagan banaanbax weyn oo lagaga soo horjeedo gumaysiga Itoobiya laguna taageerayo kacdoonka shacbiga ah ee ay wadaan qowmiyadaha Oromada iyo Axmaarada.
Banaanbaxan oo in muddo ah laga soo shaqaynayay ayaa waxaa si wadajir ah uga qayb qaadan doona jaaliyadaha Ogadenya,Oromia,Ahmara iyo dhamaan shucuubta kasoo horjeeda gumaysiga macangaga ah ee sida qasabka ah ku haysta umadaha xoriyad doonka ah.
Jaaliyada Denmark oo lagu yaqaano qabanqaabinta iyo hormuudnimada banaanbaxyada iyo yagleelida ha,yadaha urur ee ONLF ayaa banaanbaxan ka qaadanaysa doorka u weyn waxaana kala soo qayb galaya jaaliyadaha Ogadenya ee Sweden iyo Norway,waxaana la filayaa inuu banaanbaxan noqdo kii ugu weynaa ee dibad ay ka dhigaan jaaliyadaha xoriyad iyo isbadal doonka ah ee gumaysiga diidan.
Maamulka qabanqaabada banaanbaxan oo isugu jira Ogadenya,Oromia ayaa ugu baaqaya dadyowga u dhashay dhulalkaas ay Itoobiya gumaysato inay si xoog leh uga soo qayb galaan iyadoon dib loo eegaynin wixii lasoo maray gacmahana la isku qabsado baanbaxaas.
Hurdaayoow haka maqnaanin .
Wixii faahfaahin ah kala xidhiidh hoos.